ချစ်ဇနီးရဲ့ ပကာသနမပါတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကြောင့် ပီတိဖြာခဲ့ရတဲ့ လင်းလင်း - ThutaStar
ချစ်ဇနီးရဲ့ ပကာသနမပါတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကြောင့် ပီတိဖြာခဲ့ရတဲ့ လင်းလင်း
October 2, 2019 Thuta Star အနုပညာများ 0
unicode ခွိုမှိနလြှနြးလှတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငဆြိုငထြားတဲ့ လငြးလငြးနဲ့ ခစွသြုဝတေို့ ဇနီးမောငနြှံနှစြဦးကတော့ အရုပလြေးတှလေို ခစွစြရာကောငြးတဲ့ အမှာသမီးလေးနှစြဦးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပတြှလေုပရြငြး ဘဝကိုပွောရြှငအြေးခမြွးစှာ ဖှတသြနြးနတောပါ။ ခငပြှနြးကို အရမြးခစွပြှီး လေးစားလှနြးတဲ့ ခစွသြုဝကတေော့ ဒီကနေ့ အောကတြိုဘာလ(၂) ရကနြမှေ့ာ ကရွောကတြဲ့ ခစွခြငပြှနြး လငြးလငြးရဲ့ မှေးနလေ့ေးအတှကြ ခငပြှနြးကှိုကတြဲ့ ဟငြးတှရယြေ ခကွကြွှေးခဲ့တဲ့အကှောငြး လူမှုကှနယြကမြှာ ဝမွှပေေးထားတာတှရေ့ပါတယြ။ ဘာပကာသနမှမပါတဲ့ ခစွဇြနီးရဲ့မှေးနလေ့ကဆြောငကြှောငြ့ မှေးနရှေ့ငြ လငြးလငြးကတစယြောကြ အရမြးကို ကွနပေနြတောပါနြော။
ခစွပြရိသတတြှအတှေကြ အရမြးကို အားကစွရာကောငြးတဲ့ Romantic ဆနဆြနြ အိမထြောငရြေးလေးကို ပိုငဆြိုငထြားတဲ့ အဆိုတြော လငြးလငြးနဲ့ ခစွသြုဝတေို့ ဇနီးမောငနြှံရဲ့အကှောငြးကို ဖောပြှပေးလိုကပြါတယနြော။
အရမြးကို အလိုကသြိပှီး ခစွစြရာကောငြးတဲ့ ဇနီးခွောလေး ခစွသြုဝကတေော့ “ကိုယလြညြးဒါပဲပေးနိုငတြယြ ခစွပြါ ဒီထကပြိုခစွပြါ နူးညံ့ပါ ပွော့ပွောငြးပါ(ပလာတူးအပှောအရဆို အပိုတှလေုပပြါပေါ့အေ)မှေးနရှေ့ငပြလာတူးအတှကြ 2nd postနြော!! လကဆြောငတြှကတေော့ပေးတာ ၂ခါတောငရြှိပှီ ဆိုတော့..ဟဲဟဲ🥳😝😜🤩ဒါပဲပှောမယြ ဟဲဟဲ” ဆိုပှီး ခငပြှနြးကှိုကတြဲ့ ဟငြးတှခကွေပြှီး မှေးနလေ့ကဆြောငအြဖှစပြေးခဲ့တဲ့အကှောငြး လူမှုကှနယြကမြှာ ဝမွှပေေးထားတာပါ။
ခစွဇြနီးလေးက မတျေတာတှအပှေညြ့နဲ့ ခကွထြားပေးတဲ့ ဟငြးတှကေို သဘောကနွတေဲ့ လငြးလငြး…။
အိမထြောငသြကတြမြး ၅နှစကြွောရြှိသှားပှီဖှစတြဲ့ လငြးလငြးနဲ့ ခစွသြုဝတေို့ ဇနီးမောငနြှံနှစြဦးကတော့ တစနြတေ့စခြှား ပိုပိုတိုးလာတဲ့ သံယောဇဉတြှနေဲ့အတူ ပှီးပှညြ့စုံတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနတြီးပုံဖောထြားကှတာပါ။ လငြးလငြးနဲ့ ခစွသြုဝတေို့ ဇနီးမောငနြှံနှစြဦးကတော့ သမီးလေးတှရေဲ့နာမညနြဲ့လညြးငှကှေေးမတတနြိုငတြဲ့ ကလေးငယတြှရေဲ့ကနြွးမာရေးအတှကဖြောငဒြေးရှငြးတစခြု တညထြောငထြားပါသေးတယနြော။ ခစွပြရိသတတြှလညြေး ခငပြှနြးကို အရမြးခစွတြတလြှနြးတဲ့ ခစွသြုဝရေဲ့လကဆြောငလြေးကို သဘောကရွငြShare သှားကှဖို့ မမပေ့ါနဲ့နြော။
zawgyi ချိုမြိန်လွန်းလှတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ အရုပ်လေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမြွာသမီးလေးနှစ်ဦးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ဘဝကိုပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပါ။ ခင်ပွန်းကို အရမ်းချစ်ပြီး လေးစားလွန်းတဲ့ ချစ်သုဝေကတော့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ(၂) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်ခင်ပွန်း လင်းလင်းရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် ခင်ပွန်းကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေရယ် ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘာပကာသနမှမပါတဲ့ ချစ်ဇနီးရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကြောင့် မွေးနေ့ရှင် လင်းလင်းကတစ်ယောက် အရမ်းကို ကျေနပ်နေတာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို အားကျစရာကောင်းတဲ့ Romantic ဆန်ဆန် အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အရမ်းကို အလိုက်သိပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေး ချစ်သုဝေကတော့ “ကိုယ်လည်းဒါပဲပေးနိုင်တယ် ချစ်ပါ ဒီထက်ပိုချစ်ပါ နူးညံ့ပါ ပျော့ပျောင်းပါ(ပလာတူးအပြောအရဆို အပိုတွေလုပ်ပါပေါ့အေ)မွေးနေ့ရှင်ပလာတူးအတွက် 2nd postနော်!! လက်ဆောင်တွေကတော့ပေးတာ ၂ခါတောင်ရှိပြီ ဆိုတော့..ဟဲဟဲ🥳😝😜🤩ဒါပဲပြောမယ် ဟဲဟဲ” ဆိုပြီး ခင်ပွန်းကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေချက်ပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
ချစ်ဇနီးလေးက မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ ချက်ထားပေးတဲ့ ဟင်းတွေကို သဘောကျနေတဲ့ လင်းလင်း…။
အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၅နှစ်ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုတိုးလာတဲ့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့အတူ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားကြတာပါ။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ သမီးလေးတွေရဲ့နာမည်နဲ့လည်းငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု တည်ထောင်ထားပါသေးတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ခင်ပွန်းကို အရမ်းချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့လက်ဆောင်လေးကို သဘောကျရင်Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဖုန်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတဲ့ မိန်းကလေး ရင်ကွဲစရာဖြစ်ပွား